खुल्यो मलेसिया रोजगार, कति हजार कामदार जान पाउने ? • raradiodarpan.com
खुल्यो मलेसिया रोजगार, कति हजार कामदार जान पाउने ?
रेडियो दर्पण संवाददाता
२५ मंसिर, काठमाडौं ।
मलेसियाले सबै क्षेत्रमा विदेश कामदार लैजाने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको मलेसियाको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेकोे बताइएको छ । कोरोना भाइरस संक्रमण विश्वव्यापीरुपमा फैलिएपछि मलेसियाले सन् २०२० मार्च १८ देखि विदेशी कामदार भर्ना गर्न रोकेको थियो । मलेसियाले करिब दुई वर्षपछि विदेशी कामदारका लागि ढोका खोलेको हो ।
मलेसियाले यसअघि पहिलो चरणमा प्लान्टेशन भनिने रवर र पाम उद्योगमा मात्रै नयाँ विदेशी कामदार लैजान पाउने नीति लिएको थियो । शुक्रबार भएको नयाँ निर्णय अनुसार उत्पादन, सेवा क्षेत्र, कृषि, प्लान्टेशन र घरेलु कामदारको नयाँ भर्ना खुलाएको हो ।
मलेसियाको राजधानी क्वालालम्पुरमा रहेको नेपाली दूतावासले नयाँ कामदार भर्ना खोल्ने मलेसियाको निर्णय यसअघि नेपालसँग भएको श्रम सम्झौता अनुसार मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने बताएको छ ।
नेपाली दूतावास मलिसियाका काउन्सिलर श्रम दिपक ढकालले नयाँ कामदारको एप्रुभल खुलेको विस्तृत जानकारी आउन नसकेको भन्दै मलेसियाको स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर खुला गर्ने निर्णय भएको विभिन्न स्रोतबाट जानकारी आएको बताए ।
मलेसियाले शुक्रबार बंगलादेशसँग प्लान्टेशनसहित सबै क्षेत्रमा कामदार लिने सम्झौता गरेको बताइएको छ ।
नेपाल र मलेसियाबीच २०७५ कात्तिक १२ मा सम्झौता भएको थियो । नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम समझदारी अनुसार नेपालबाट कामदार पठाउन लाग्ने सेवा शुल्क, दुईतर्फी हवाई टिकट, भिसा तथा स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने प्रावधान छ ।
सम्झौतामा कामदार पठाउने नेपाली म्यानपावर कम्पनीलाई मलेसियाका रोजगारदाताले सेवा शुल्क वापत कामदारले पाउने मासिक न्यूनतम तलबको ५० प्रतिशत रकम सेवा शुल्क दिनु पर्नेछ । यसका अतिरिक्त नेपालमा हुने स्वास्थ्य परीक्षण र सुरक्षा जाँचको खर्च रोजगारदाताले पहिलो महिनाको तलबमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
पल शाह प्रकरण : नाम र पैसाको पछाडि लाग्दा गुमेको ‘मानवीयता’
प्रदीप कार्की गत सातादेखि नेपालमा मिडियासँगै सामाजिक सञ्जालमा नाबालिग गायिकाले अभिनेता पल शाहविरुद्ध जबर्जस्ती...
प्रिय बादल, हिमाल जस्तै सफा तिम्रो रुप हेर्दै रहर लाग्ने देखेपछि तिमिलाइ मनका पिर...
मैले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दिनँ: प्रचण्ड (अन्तर्वार्ता)
प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल...
रमदानमा माग्दै हिँड्नेविरुद्ध दुबई प्रहरीको एक्सन, १ सय ७८ पक्राउ
दुबई। मुस्लिम धर्मालम्बीहरुको पवित्र पर्व रमदानमा दान माग्दै हिड्ँने १ सय ७८ जनालाई दुबई...
मलेसियामा फेरी एक नेपाली को मृत्यु ! हार्दिक श्रद्धाञ्जली
कोरियामा एक नेपाली कामदारलाई ओमिक्रोन
९० बोटल घरेलु म’दिरासहित कुवेतमा तीन नेपाली पक्राउ
भारतमा जोडदार भूकम्पको धक्का
३० जेठ, काठमाडौं । भारतमा जोडदार भूकम्प गएको छ । सोमबार बिहान तिब्बतदेखि मेघालयसम्म...
श्रद्धाका भाइ सिद्धान्त बेंगलुरुमा रेभ पार्टीबाट पक्राउ
उद्घाटन गर्दागर्दै भत्कियो पुल, नालामा खसे मेयर
काठमाडौं, ५ कात्तिक । अकाउन्टीविलिटी ल्याब नेपालले इन्टेग्रिटी आईकन–२०२१ सार्वजनिक गरेको छ । ल्याव...
युरोपको यी देशमा नेपालीहरुलाई अबसर, तलव २ लाख
काठमाण्डौं । वैदेशिक रोजगारीको लागि युरोपका माल्टा, पो ल्याण्ड, फ्रान्स, पोर्चुगल, टकीं, लगायतका देशरुबाट...
Copyright © 2016 jagritikhabar.com सम्पर्क/हाम्रो बारे